"Ny mpivady sambatra" Mampiaraka fa ny filalaovana fitia, ny firaisana ara-nofo raha tsy misy ny fanoloran-tena sy ny fisoratana anarana. Roa-in-iray. Moskoa
«Ny mpivady sambatra» Mampiaraka fa ny filalaovana fitia, ny firaisana ara-nofo raha tsy misy ny fanoloran-tena sy ny fisoratana anarana. Roa-in-iray. Moskoa
Soso-kevitra: teny FAMPIDIRANA ny filalaovana FITIA. Ny ankamaroan’ny vehivavy ao amin’ny tranonkala ity te-hihaona tsy ho mora ny fifandraisana raha tsy misy ny Varotra sy ny manokana ny adidy. Ny olona sy ny fitaovana efa misy fitarainana, sy ny sata ara-panambadiana ny olona koa tsy maninona. I. e. , ny lehilahy manambady ny tahan’ny tena tsara sy mafana.
Maizina-maitso volo-maso mainty volo vehivavy maneho hevitra toa, Manao cosmetology, tsy manambady. Mitady olona Slav avy telo-polo taona no ho miakatra mba hanomezana fanohanana ara-nofo.
Natasha, tarehy, modely, blonde, ny maso manga. Sahaza ho akaiky fihaonana amin’ny fitaovana hanohanana ny faritra. Psikology. Azo atao fifandraisana maharitra.
Hivory hiaraka mendrika, mahafinaritra ny olona, avy telo-polo taona, mba hanomezana ny fanohanana ara-nofo. Momba ahy: slim, manintona, ny fampianarana ambony, ny fanaovana fitness, tia ny mandeha. Azo atao fifandraisana maharitra.
Manaram-batana sy malemilemy, tsy ilaina itambaram-be. Nahita fianarana Muscovite, mazava tsara mandroso. Hivory hiaraka manan-tsaina, Olona mendrika ny efa-polo taona na mihoatra. Liana akaiky fihaonana miaraka amin’ny fanohanana ara-nofo, azo atao fifandraisana maharitra. Mahay mankasitraka ny saina sy hamaly. Ny toeram-pivoriana dia misy.
Manam-pahaizana, manan-tsaina, milamina, amin’ny toerana misy okay. Manasa anareo aho mba hijery ny olon-tiany sy ny fifandraisana amin’ny vehivavy avy ao Maosko, ara-dalàna hanangana, amin’ny tony kanto, tsara-groomed. Izy dia tsy nisy hetra, ny fifandraisana amin’ny vehivavy legible. Ny sary tsara tarehy tsy ho lavo ao ny vehivavy mankasitraka, ambonin’ny zavatra rehetra, ny faharanitan-tsaina, ny hatsaran-tarehy ara-tsaina, ara-boajanahary. Manambady ary afaka hihaona ihany mandritra ny andro amin’ny andavanandro. Mahaliana maharitra ny fifandraisana, ny fotoana iray-ny fivoriana tsy liana. Francois, Maizina-maitso volo-maso mainty volo vehivavy maneho hevitra toa, Manao cosmetology, tsy manambady. Mitady olona ny Eoropeana fijery avy telo-polo taona no ho miakatra mba hanomezana fanohanana ara-nofo
← Maimaim-Poana Amin'ny Aterineto Mampiaraka Toerana Tsy Misy Fisoratana Anarana
Ny sampan-draharaha Mahafantatra ny tsirairay - ny fanahy vady eto →